| 031 njegharị
DAY 01: BỤ Ọ BỤ ỤBỤRỤ
Mgbe anyị rutere ọdụ ụgbọ elu dị na Port Blair, onye nnọchianya anyị ga-enweta ma kpọga ya na họtel ahụ. Mgbe anyị na-elebanye na họtel na obere ezumike, anyị na-amalite nlegharị anya na Anthropological Museum, nke na-egosiputa ngwá ọrụ, ụdị ebe obibi, nkà na aka aka nke ebo ndị Amoriginal nke Andaman & Nicobar Islands ahụ site na Anthropological Museum, anyị na-aga n'akụkụ osimiri Corbyn's Cove . Ebube & Ngosipụta Igwe na Ụlọ Mkpọrọ Cellular: Na mgbede, anyị na-akwali maka Uhie na Sound Gosi na Ụlọ mkpọrọ Cellular ebe a na-eweta ndụ nke nnwere onwe dị ndụ.
DAY 02: Ụjọ BLAIR - ROSS ISLAND - NORTH BAY ISLAND (CORAL ISLAND) - EKWU ỤBỤ (VIPER ISLAND)
Taa, mgbe anyị risịrị nri ụtụtụ, anyị ga-aga n'ihu maka ụbọchị zuru ezu na-enye ọṅụ na-aga n'ihu Ross Island, North Bay (Coral Island) na Harbor Cruise (Viper Island). Ross Island, isi obodo Port Blair dị n'oge ọchịchị Briten, ugbu a, ọ bụ ihe dị egwu, ebe ọ bụ na ọ dị ka ọ na-arụ ọrụ. A obere ihe ngosi nka na-egosipụta foto na ihe ndị ọzọ antiques nke Britishers, bara uru n'àgwàetiti ndị a. North Bay (Coral Island) na-enye coral osisi, azụ ndị mara mma na ndụ mmiri mmiri. Anyị nwere ike ilele coral ndị a dị mma na mmiri mmiri na-agba n'ime mmiri n'ime ụgbọ mmiri na-ekpuchi mmiri na nkedo (nhọrọ). MGBE OWU (Viper Island): N'ehihie, anyị na-aga maka ọdụ ụgbọ mmiri, echiche nke panoramic nke isi asaa si n'oké osimiri, ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri na-asọ mmiri, wdg tinyere njem na Viper Island ebe a ga-egbu ya.
DAY 03: ỤBỤRỤ ỤBỤ - ỌTỤTỤ SITE - SHOPPING
Mgbe anyị risịrị nri ụtụtụ, anyị na-akpọrọ gị maka njem nleta na Port Blair nke na-ekpuchi Ụlọ Nche (National Memorial), Chatham hụrụ igwe nri (onye kasị ochie na nnukwu igwe nri n'Eshia), Forest Museum, Samundrika (Naval Marine Museum), Science Center, Gandhi Park , Marina Park, Andaman Water Complex Complex. Ịzụ ahịa: N'anyasị, anyị na-aga Sagarika (Govt Emporium of Handcraft) na ahịa obodo maka ịzụ ahịa.
DAY 04: N'ỤLỌ NCHE N'ỤLỌ ETAMAN